နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အုပ်ချုပ်စီမံရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂၀၂၀-၂၀၂၁) – MBC
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ခရစ်စမတ် ရုံးပိတ်ရက် (၂၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၅.၁၂.၂၀၂၂ အထိ)
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် အုပ်ချုပ် စီမံရေး အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၀-၁၁)ရက်နေ့များတွင် နံနက်(၈း၀၀)နာရီမှ ညနေ (၅း၀၀)နာရီ အထိ Zoom Application ဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ တက်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း (၂၄၂)ဦး ရှိပြီး၊ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌများဖြစ်ကြသော Rev. Dr. မောင်မောင်ရင်၊ Dr. အူဗျစ်ဂျာဘူ၊ Rev. ဒဲန်းနစ်ငွန်ထောင်းမန် ၊ အသင်းချုပ် ဦးဆောင်သူများဖြစ်သော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ထန်ကျင့်လျန်း၊ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ရောဘတ်ပွန်း နှင့် ဘဏ္ဍာထိန်း ဆရာမ နန်းသူဇာမွန် တို့က ဦးဆောင်လျက် အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို ညနေ (၄း၃၀)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းလျက် အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေး ပထမနေ့ရက်တွင် ဥက္ကဌကြီး Rev. Dr. မောင်မောင်ရင် ဦးဆောင်လျက် အသင်းချုပ် ဓမ္မ အမှုတော်ဆောင်များ ဌာန၏ သဘာပတိ Rev. ဦးဇော်မိုင် ဆုတောင်း ခြင်းဖြင့် အစပြုကာ၊ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ပြီးနောက်၊ တက်ရောက် လာသူများကို အမည် ခေါ်ခြင်းဖြင့် မှတ်သားပါသည်။ ထို့နောက် လွန်ခဲ့သော အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ဖတ်ကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းမှ ပေါ်ပေါက်သော ကိစ္စများကို ဆွေး‌နွေး အကြံပြုကြခြင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ (ဌာနအလိုက် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ်၏ အစီရင်ခံခြင်းများ အပါအဝင်) စုစည်း အစီရင်ခံစာကို လက်ခံ ဆွေး‌နွေး ခြင်း အတည်ပြုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာထိန်း၏ တင်ပြခြင်းများကို ဆွေး‌နွေး အကြံပြု လက်ခံကြပါသည်။
အခက်အခဲများစွာ ရှိ‌သော်လည်း ကြိုးစား၍ တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ကြသော လူမျိုးစုနှင့် ဒေသန္တရအဖွဲ့ချုပ်များ၊ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သော အသင်းတော်(၂)ပါး၊ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဌာနသဘာပတိနှင့် တာဝန်ခံများအားလုံးတို့နှင့်အတူ On line တွင် အဆင်ပြေအောင် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးကြသော အသင်းချုပ် ဝန်ထမ်းများနှင့်တကွ အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇-၁၈)ရက် နေ့များတွင်လည်း နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၏ (၁၂၄)ကြိမ်‌မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပ ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ လူဦးရေ (၁၀၀၀)အတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။